सुत्नुअघि नखानुहोस् यस्ता खानेकुरा स्वास्थ्यमा पर्ने गर्छ गम्भीर असर !! | सुदुरपश्चिम खबर
यो पनि पढ्नुहोस् : के करणले विवाहपछि महिलाको पेट घट्दैन ?पेट बढ्ने समस्या धेरैलाई भएको पाइन्छ । विशेषगरी विवाहित महिलाहरुमा यो समस्या अत्यधिक पाइन्छ । जिम जाँदा पनि कतिपयको पेट घटाउन मुश्किल पर्छ । विशेषगरी, ४० वर्ष कटेका महिलाहरुलाई त झनै पेटमा लागेको बोसो घटाउने काम निकै गाह्रो हुन्छ । किन हुन्छ पेट घटाउन मुश्किल ?
शिक्षक श्रेष्ठ हत्या प्रकरणः विप्लव र प्रकाण्डसहित ४२ जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर !